Oolmaa Dhaddachaa Iyyannoo Mirga Hidhamtummaa Jawaar Mohammad fi Obbo Baqqalaa Garbaa 9/15/20 | Jawar Mohammed
OMN: (Fulbaana 15, 2020) Oolmaa Dhaddachaa Iyyannoo Mirga Hidhamtummaa Jawaar Mohammad fi Obbo Baqqalaa Garbaa —
Dhaddacha har’aa kanarratti, ajajni mana murtiitii kennamu bulchiinsa mana hidhaa biratti hojiitti hiikamuu dhabuusaan wal qabatee yaadonni gama gamanaa dhaggeeffatameera.
Keessattuu, mirga tumaan seeraa shakkamaaf kennu dhabuu hidhamtootaa ilaalchisuun, sarbamni mirga namoomaa bulchiinsa mana hidhaa sana keessatti, hidhamtoota siyaasaa irratti raawwatamaa jiru gadi fageenyaan ilaalamuu akka qabu, Obbo Baqqalaa Garbaafi Jawaar Mohaammad irra deddeebiin gaafataniiru.
Yaadota kaasan keessattis, mirgi shakkamtoonni bakka tokkotti hidhamuu, gola dukkanaa keessatti hidhamuu dhiisuu, ifa aduu ga’a argachuu, kanneen dhukkubsatan waldhaansa argachuun wal qabatee, hidhamtoota siyaasaa bakka sana jiran hundaaf wal qixatti mirgi kabajmaa hin jiru jechuun Obbo Jawaar Mohammad dubbataniiru.
Obbo Jawaar irra deddeebiidhaan, “hidhamtoota keessaa Iskandir Naggaafi Sintaayyoo Chokkol irratti sarbamni mirga namoomaa raawwatamaa jira waan ta’eef, tajaajilli muraasni nuti argannu illee, isaaniifis raawwatamuu qaba” jechuun Mana Murtii gaafate.
Obbo Baqqalaa Garbaas yaaduma Jawaar deggeruudhaan, “dhiibbaan addaa hunda keenyarratti raawwatamaa jiraatus, namoonni biroon ammoo nu caalaa miidhamaa waan jiraniif murtii haqaa barbaanna. Galmeen keenya wal fakkaata ta’uu baatus , Mirgi xiqqoon nuuf eegame hidhamtoota warra kaanifis(Eskindiirfaa) eegamuu qaba. Yeroo nuuf mirgi eegamee, Iskandirfaatti balballi cufamee arginu nutti dhaga’ama” jechuun dubbatani.
Deddeebisni yaadaa gamaafi gamanaa dhaga’ameenis, shakkamtoonni kun waan isaanirratti raawwatamaa jiru caalmaatti, sarbama mirga namoomaa mana hidhaa sana keessatti namoota biroo irratti raawwatamaa jiru balaaleffatanii mormani.
Abbaan Murtiis, deebii isaaniif kenneen, “Galmeen har’a ilaalamaa jiru kan Iskandir Naggaa waan hi taaneef, dhimmi isin dubbachuu dabdeessan waa’ee keessan qofa” kan jedhu ture.
Walumaa galatti, Obbo Jawaar Mohammad fi Obbo Baqqalaa Garbaa waa’ee ofii isaanii caalmaatti, dhimma hidhamtoota kan biroo kan dubbatan yoo ta’u, Shamsaddiin Xahaa yaalaa fayyaa ga’aa argachuu dhabuusaa, Haamzaa Booranaa dabalatee Iskandir Naggaafi Sintaayyoo Chokkol irratti sarbamni mirga namoomaa rawwachaa waan jiruuf murtiin haqa qabeessi barbaachisaa ta’uu gaafatan.
Dhaddacha har’aatiinis ajajni manni murtii hojiitti hin hiikamin jiran akka ariitiin hojiirra ooluu ajajamuun, oolmaan dhaddachichaa goolabame.
Previous articleYouth Lead Summer of Oromo Protests in Minnesota
Next articleEthiopian opposition leader says terror charges are politically motivated